2 0 1 7. FITIAVANA, ny rariny sy ny FINOANA. 2 0 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Tamin’ny 2017 fiandohan’ny taona, tiako aloha, izay vao misimisy ity lahatsoratra manan-danja amin’ny fotoana Tranga isika miaina amin’izao fotoana izao ho anareo rehetra, ry malala rahalahy sy anabavy ao amin’i Kristy sy ny malalany bilaogy mpamaky, ny faniriako ny taona vaovao 2017 sambatra.
A rehetra, manantena aho fa Andriamanitra miaro lavitra fakam-panahy sy ny fanampiana indrindra, ny fitana ny amin’ity taona ity 2017.
Mivavaka aho fa Andriamanitra manome anao ny hery hiatrehana ny olana eo amin’ny fiainana izay taona vitsivitsy kokoa ary zava-dehibe kokoa.
Andriamanitra anie hanome anao ka hiaro anao ho salama. Mamela anao ny tsy hanapaka ny tena ilaina sy manome anareo sy maneho ny fanohanana sy ny fitiavana amin’ny fotoana rehetra.
Enga anie ianao hijanona ao amin’ny fiainana ao amin’ny boky mba tsy mba iharan ‘ny fahatezeran’ Andriamanitra izay midina tsikelikely amin’izao tontolo izao nandritra ny taona maro.
Fitiavana, Lalàna, sy ny Finoana
Mariho fa ity lahatsoratra ity fitiavana, Lalàna sy ny Finoana mameno ny lahatsoratra:
DIMY ZAVA-DEHIBE 2017
Isika dia tsy maintsy ho fantatsika tanteraka fa ny fitiavana, Lalàna sy ny finoana dia singa manan-danja telo ny fomba fiaina kristianina sy ny afaka eo amin’ny tavan’i Andriamanitra mba hamonjy antsika, na manameloka antsika ho mandrakizay.
Mba hahatakarana ny olana dia toa ilaina ny manao ny fampahatsiahivana kely momba ny fotoana iainantsika.
Nanomboka tamin’ny 14 May 1948, araka izay efa efa niteny imbetsaka sy voaporofo tao amin’ny bilaogy, dia niditra ny vanim-potoana ara-baiboly amin’ny faran’ny fotoana.
Io vanim-potoana ara-Baiboly hatramin’ny farany ny fotoana mitranga ny taranaka iray.
Manana ny fandraisana ho mpikambana ao amin’ny Filazantsara (indrindra fa ny Matio 24 Link: parany ), izay ihany koa ny milaza fa i Jesoa Kristy dia hiverina any an-tany ara-batana teo anoloan’ny faran’ny ity taranaka farany mba hanjaka ao amin’ny olombelona ny arivo taona.The Millenium .
Araka ny hitantsika, ny fe-potoana farany dia miandalana fotoana amin’ny fijaliana, toy ny fanaintainana ny fiterahana.
1 Tesalonianina 5: 3
Satria fantatrao ny tenanao fa ny andro ny Tompo ho avy tahaka ny mpangalatra amin’ny alina. 3 Raha izy ireo manao hoe: Miadana sy mandry fahizay; Ary tampoka ny fandringanana avy aminy, toy ny asa fanaintainana eo amin’ny vehivavy bevohoka, ka tsy afa-mandositra. 4 Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin’ny maizina, fa izany andro izany mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra , …
Ny andro farany fanaintainana lasa mafy sy mitohy tahaka ny hitantsika isan’andro.
News , (ady, tabataban ‘ady, ny fifindra-monina, ny fampihorohoroana sy ny jiady no lohateny lehibe amin’ny haino aman-jery rehetra) ny fahoriana ny olombelona , (faharavana, tsy fandriampahalemana, fahantrana, loza, aretina, herisetra sy ny fahaverezan’ny soatoavina lasa loza voajanahary eo amin’ny fiainana) ny fanaintainana ny biby (Maty tsy voazava an-tapitrisany isan-taona manerana izao tontolo izao nanomboka tamin’ny 2008 ny trondro, vorona sy ny bibidia sy ny biby fiompy) Voamarik’i, noho ny tsi-fanazavana, ny haino aman-jery tatitra minima sy ny fanaintainana ny tany (tsunami, oram orana, mihozongozona ny tany, rivo-doza, tondra-drano, afo sy ny rivo-doza lasa bebe hafahafa) no aneken’ny maro toy ny manaitra loza, fa tanteraka ara-dalàna.
Ny napetraka ny fanaintainana rehetra ireo na dia afaka mahita fanazavana sasany misaraka, na izany aza mamorona ny rehetra izay niavaka ary resahina ao amin’ny Baiboly, toy ny iray amin’ireo famantarana nanambara ny ela fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary ny halehiben’ny fanaintainana rehetra ireo dia manamafy tsara fa fotoana ny fiverenan’ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy no tena akaiky.
Na dia ny fahatakarantsika ny fotoana farany mamela antsika mba hanaporofoana fa ity taranaka ity dia tsy teo anatrehan’i Jesoa Kristy ara-batana Niverina ho any An-tany ny arivo taona nanjakany, izay miafara arivo taona tatỳ aoriana, noho ny fitsarana farany. ( Ny fitsarana farany no ho farany ny olombelona mety maty. Sasany mandrakizay no ho ambanin’ny lalàna ‘Andriamanitra sy ny olon-kafa mandrakizay ambanin’ny lalàn’i Losifera).
Na dia eo aza izany dia hitantsika fa ny fanaintainana lasa tena matanjaka sy mitohy.
Tsy misy olona afaka milaza hoe rahoviana marina no ny fiverenana amin’ny voninahitra ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy.
Fantatsika fa ao amin’ny Baiboly ny taranaka fotoana dia neken’ny ho mandritra ny 40 taona, fa ny 70 taona, ary na dia 80 taona, ary koa ny taona 120 taona indrindra ny fiainana ao amin’ny Genesisy 6: 3
Mazava ho azy fa na dia eo aza ny olana eo amin’ny fiainana sy ny haben’ny fanaintainana, Andriamanitra dia afaka hahatonga antsika miandry mandra-2068 (1948 + 120 taona) ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Hoy i Jesosy Kristy zavatra tena manan-danja: » Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny Farany, ny fiandohana sy ny fiafarana » Ity andian-teny izay milaza intelo toy izany koa amin’ny fomba hafa mampiseho zava-misy ny lehibe sy manan-danja manokana.
Ity teny marina dia tena ilaina na dia tena ilaina miaraka amin’ny Chapter 24 ao amin’ny Matio mba hahazo izay fe-potoana dia ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Ao amin’ny toko faha 24 ao amin’ny Matio i Jesoa dia manazava izay zava-mitranga rehefa taranaka voalohany izay teraka no teboka fanombohana ny Fivavahana Kristianina (izy no voalohany) ary inona no hitranga amin’ny farany taranaka talohan’ny fiverenany. (Ho koa ny farany). Izany dia midika fa ny miverina amin’ny fahasoavana dia tanteraka ka noho izany tsy misy olona ho voavonjy noho ny fitiavana sy noho izany ny mba ho voavonjy azy handeha hamaky ny lalàna.
Ao amin’ny toko faha-24 ao amin’ity Matio, i Jesosy dia naminany ny famongorana ny an’i Jerosalema tempoly. Ary tamin’ny taona fito-polo nitranga izany fandringanana izany tempoly naminany Jesosy Kristy.
Avy eo isika dia afaka mahatakatra fa rehefa miteny i Jesosy taranaka ity amin’ny andininy faha-34 amin’ny toko faha-24 ao amin’ny Filazantsaran’i Matio
34 Lazaiko aminareo marina tokoa ity taranaka ity fa tsy ho lany, fa izany rehetra izany no nitranga.
Izany no taranaka ny 70 ka noho izany satria fantatrareo fa ny voalohany ny farany famantarana ny fotoana dia May 14, 1948, ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy dia tokony ho tsy taty aoriana noho ny May 13, 2018.
Mazava ho azy fa ny fomba tsotra afaka milaza fa io fiverenana amin’ny voninahitry ny Tompontsika Jesoa Kristy ho an’ny taona 2018 angamba ho an’ny antoko ny Paska tamin’ny 2 Aprily 2018.
Tsy azo atao, ary na dia inoana, nefa manalavitra Anao amin’ny sasany, satria ny ho avy an’Andriamanitra irery ihany.
Toy ny olona rehetra afaka mahita avy amin’ny bilaogy tsy tapaka aho fotoana vitsivitsy mikendry ny fotoana izay toa misy ifandraisany amin’ny faminanian’ny Baiboly nanambara ny fiverenan’ny Tompontsika.
Na dia fotoana aho tsy lasibatra ireo ny hiverina ho any amin’ny voninahitra, izy ireo kanefa mbola zava-tsarotra ho an’ny Fiangonana sy ny Finoana. Indrindra fa tamin’ny 2015 ny fanambarana ny Papa François farany Septambra tao St. Patrick ny Katedraly any Etazonia. Aiza izy nilaza ambany ny fikotrokotroky ny tehaka fa ny fanomboana an’i Jesosy Kristy dia tsy mahomby ny olombelona. Link .
Ny tanjon’ity bilaogy ity dia tsy mba hanambara ny fiverenan’ny daty ny Tompontsika sy Jesosy Kristy Mpanjaka, fa mba hahatakatra fa azo antoka fiverenana io. Izany no taranaka. Ary antomotra rehefa jerena ny halehiben’ny ny famantarana sy ny fahatanterahan’ny faminanian’ny Baiboly nomanina ho an’ny andro farany.
Izaho ihany no mpitory izay manambara ny fiverenan’ny ny Tompo tao am-poko sy ny fanahiko.
Ny tanjona dia tsy ny mivarotra taratasy na dia efa nanoratra boky roa momba an’Andriamanitra sy ny maha-olona. (Ny voalohany: Ny Mpitoriteny Miverena ny Mpanjaka , ny faharoa Frantsa, Fandrosoana sy ny Repoblika Nandresy )
Ny tanjona dia ny olona rehetra dia afaka miomana ho amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy mba ho voavonjy ary mbola voasoratra anarana ao amin’ny bokin’ny fiainana sy ny ela tonga mandrakizay amin’Andriamanitra fa tsy amin’ny Losifera.
Raha ny vinavina ny fiverenan’i Jesoa Kristy ho an’ny Paska Aprily 2, 2018 no manaporofo ho ny daty nofidin’Andriamanitra hatramin’ny nahariana izao tontolo izao ho amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy mba hitondra ny olombelona mandritra ny arivo taona isika Olona ny Fara Andro miavaka. Noho izany manana 15 volana ny miandry.
Midika izany fa ireo volana dimy ambin’ny folo no ho zava-dehibe indrindra eo amin’ny fiainana volana.
Rehefa afaka izany, dimy ambin’ny folo volana isika dia ho voavonjy na hohelohina.
Ireo izay ho voavonjy amin’ny alalan’ny FITIAVANA
Koa satria ny lasa ‘i Jesoa Kristy dia misy roa arivo taona, isika ao amin’ny toetry ny fahasoavana.
Midika izany fa ireo izay vita batisa, izay efa nanaiky an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy, izay mibebaka amin’ny fahotany efa nataony, mangataka famelan-keloka avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fifandraisana ara-panahy maintiennes sy ny mpamorona.
Raha mijanona manetry tena eo amin’ny fiainana sy ny fikarakarana mba hanampiana ireo izay mila ny fanampiana.
Koa Eny! Izy ireo ny Kristianina, dia anisan’ny ‘ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy, ary azo antoka fa ny ho voavonjy noho ny fitiavany. Jereo ny lahatsoratra manokana kokoa: Sahia ny finoana an’Andriamanitra sy i Jesoa Kristy
Izy ireo monina ny tany mandritra ny Fanjakana Arivo Taona.
Ireo izay ho voavonjy amin’ny alalan’ny Lalàna
Maro no mahita tafika dia ireo izay miaina ny fitsipika ny fiainana, tsy mitady hanao ratsy ny hafa, fa miaina fotsiny ao anatin’ny tsy fahalalana ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy dia ho voavonjy ho an’ny sasany (ny arivo taona tatỳ aoriana) ny lalàna ny Andriamanitra ny fitsarana farany sy ny maty dia hitsangana amin’ny maty ary hotsaraina ‘Andriamanitra araka ny asany.
Ireo izay kosa no voavonjy amin’ny alalan’ny finoana
Ny Kristianina sasany Voavonjy Noho ny Fitiavana ‘i Jesoa Kristy ary ateraka indray! Izany hoe izay nangataka an’Andriamanitra mba hitari-dalana ny ainy, mba hiaro azy amin’ny ratsy sy ny fakam-panahy.
Nandroso tamin’ny fiainana ao amin’ny fitiavana ‘i Jesoa Kristy sy ny fitambarany, ary hatoky tanteraka an’Andriamanitra, amin’ny azo antoka, avo sy mirehareha lohany ho Kristianina indrindra indrindra amin’ny andro farany.
Rehetra ny Kristianina ireo izay miaro ny fiangonana tsy misy herisetra, indraindray Nanao vivery ny ainy mba hanambara tsy ho ela ny nanjakan’i fitiavana eto an-tany miaraka amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy.
Rehetra ireo ny Kristianina, izay manome ny fiainany ho an’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny fanampiana ny sahirana, ny marary, ny mahantra sy ireo izay lalan-diso ara-panahy.
Ireo Kristianina rehetra izay voavonjy noho ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy sy ny vavolombelona dia hotahiana’ Andriamanitra sy i Jesoa Kristy.
Nandritra ireo dimy ambin’ny folo volana Losifera dia hahazo bibidia, ary namely maha-olombelona tamin’ny heriny manontolo.
Takatrareo fa ny fakam-panahy dia ho mafy sy lehibe ary dia ho tena sarotra mihitsy ny mandroso eo amin’ny fiainana sy amin’ny finoana serenely.
No tsy maintsy mahatakatra fa i Losifera dia ny mpanjakan’i fiheverana sy izay tsy maintsy foana handinika zava-nitranga sy ny zavatra nataony mba tsy handao antsika voafandrika.
Tsara ny mahatakatra fa ny mifanohitra amin’ny fitiavana foana dia tsy mankahala fa tia mihitsy indraindray!
Ny mifanohitra amin’ny lalàna dia tsy foana ny tsy fankatoavana, fa indraindray ny lalàna mihitsy.
Ny mifanohitra amin’ny finoana dia tsy foana ny tsy mino an’Andriamanitra fa ny finoana ihany.
Noho izany dia afaka mora foana handao antsika adala raha tsy mitandrina.
Fantaro fa Andriamanitra tsy misy fitiavana tsy misy lalàna, dia toy tsy misy lalàna tsy misy fitiavana .
Raha ny Losifera tsy misy fitiavana ao ny asa ary tsy misy lalàna ao amin’ny fitiavana .
Manasa anareo aho mba hisaintsaina ireo fototra samy hafa ny fitiavana sy ny Lalàna ‘Andriamanitra sy i Losifera.
Rehefa ny finoana inona izany manompo anao hieritreritra raha manompo an’Andriamanitra ianao hanompo an’i Losifera!
Ao amin’ny fitiavana Andriamanitra dia misy ny hevitra ny famelan-keloka, fangoraham-po, fanetren-tena sy ny fizarana.
Ao amin’ny Lalàn’Andriamanitra misy ny hevitra-tsaina, maha-mpikambana sy ny fanamboarana.
In Love Losifera tsy misy lalàna dia misy ny foto-kevitra momba mitarika ho amin’ny filibana sy ny filàna.
Ao amin’ny lalàna tsy misy fitiavana Losifera lasa izay ny foto-kevitra ny didy jadona sy ny fanandevozana.
Amin’ny finoana misy ny fanamarihana ny fanoloran-tena, hafanam-po, ny fitiavana sy ny fanajana ny lalàna.
Rehefa ny finoana dia hatao ny fanompoana an’Andriamanitra , dia izany no madio fahasambarana mba ho afaka hanompo an’i Jehovah amin’ny alalan’ny fanampiana ny rahalahy sy anabavy sy miaro ny fiangonana sy ny finoantsika.
Fa raha ny finoana dia hatao ny fanompoana an’i Losifera dia manova ireo izay mihazona izany amin’ny tena olon-dozabe, mpampihorohoro, jihadists sy ny ratsy ny manana voninahitra.
Ny lalana ho an’Andriamanitra dia tery toy ny fanjaitra ary izany lalana mandalo amin’ny alalan’i Jesosy Kristy irery ihany.
« Izaho no lalana ny fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako! «
Ireo tenin’i Jesosy Kristy dia tena lehibe vokany ho an’ny fivavahana rehetra amin’izao tontolo izao.
Tsy misy ho voavonjy raha tsy ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy ary noho izany dia tsy maintsy efa manaiky ho tonga Kristianina tamin’ny batisa anaty rano.
Manana dimy ambin’ny folo volana hiandry ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika amin’ny Paska 02 Aprily 2018.
Fa Andriamanitra irery ihany no manapa-kevitra ny daty ny fiverenana io dia angamba no ho tatỳ aoriana, ary angamba na dia talohan’izay.
Na izany na tsy izany fiverenana azo antoka sy mananontanona ary mila miomana.
Mba hiomanana, isika dia tsy maintsy manao ny ezaka mba handroso hatrany amin’ny fiainana noho ny herin ‘ny Fanahy fa tsy amin’ny fahalemena ny tena.
Angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’Andriamanitra mba hanampy antsika amin’ny fotoana rehetra ny fiainantsika sy hitari-dalana ny fiainantsika tsikelikely.
Mangataha amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka isika mba hamela ny fahotantsika sy hanadio ny fanahintsika.
Dia ho fantatsika tamin’ny 2017 fijaliana lehibe eto an-tany, izany tokoa hatramin’ny fotoana farany ny fanaintainana no oharina ao amin’ny Baiboly ho amin’ny fahoriana ny fiterahana ka noho izany isan-taona ny andro farany dia ratsy noho ny farany.
Ny hourglass ny andro farany Andriamanitra dia niverina ny May 14, 1948 ary ny farany lasana fotoana-bary hahita ny fiverenan’i Jesoa Kristy.
Mivavaha isan’andro fa tsy mangataka andro, satria ny fiverenana izany fanaintainana sy ny fijaliantsika dia tsy hitsahatra ny hitombo sy mampalahelo fa ny mifanohitra izy ireo hanohy sy hanamafy mihitsy aza!
Tandremo ny lelafo ny finoanareo tsara jiro ary fenoy diloilo ao amin’ny fonareo sy ao amin’ny fanahinareo mba hiampita ny maizina ny 2017.
Raha toa, araka izay mino mafy ny fiverenan’ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy dia tsy maintsy atao amin’ny taona 2018 (faran’ny ny taranaka ny 70 taona) dia 2017 fotsiny dia tsy ratsy noho ny 2016, nefa dia ho mahatahotra, satria izany dia ho ny fe-potoana andro fahatezeran’Andriamanitra.
Ity lahatsoratra ity dia tena zava-dehibe satria hypothetically nanambara ny fiverenana amin’ny tany ny Tompon’ny tompo, Mpanjakan’ny Mpanjaka, Jesosy Kristy, ny hany zanak’i Andriamanitra, dia handika azy io amin’ny fiteny rehetra, ary manasa ny rahalahy sy anabavy malalako izao tontolo izao mba hampita izany amin ‘ny mpifandray rehetra mba mba manana fahalalana rehetra, ary manomana ny fanahiny.
Ry malala rahalahy sy anabavy ao amin’i Kristy Jesosy, ianareo koa dia vavolombelona ‘i Jesoa Kristy sy ny mpiaro ny finoana sy ny Fiangonana.
Mivavaha ho an’ny famonjena ny fanahinay, Fa ny androanay rehetra rahalahy sy anabavy, ary izay rehetra ny tenin ‘ny Filazantsara dia tsy nanendrenay.
Hitahy anareo anie Andriamanitra, ary hitari-dalana ny fiainanao.